Warranty - AOOD Technology Limited
Fampahalalana momba ny Warranty
Amin'ny maha-mpamatsy peratra elektrika mitarika manerantany azy, AOOD dia manana fotony telo: teknolojia, kalitao ary fahafaham-po. Izy ireo ihany no antony mahatonga antsika ho mpitondra. Ny haitao mandroso sy ny kalitao avo lenta dia miantoka ny herin'ny AOOD, saingy ny serivisy feno sy tonga lafatra dia mahatonga ny mpanjifa hiankina amintsika.
Ny lakilen'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ao amin'ny AOOD dia matihanina, haingana ary marina. Ny ekipan'ny serivisy AOOD dia voaofana tsara, manana fahaiza-manao matihanina mahay ary fomba fiasa tsara. Ny olana rehetra nolazain'ny mpanjifa dia ho voavaly ao anatin'ny 24 ora na alohan'ny fivarotana na aorian'ny fivarotana.
Warranty momba ny kalitao
Ny singa AOOD slip assemblies dia miantoka mandritra ny herintaona afa-tsy vokatra manokana, izay ahafahanao mamerina ny ampahany tsy misy kilema ho an'ny fanoloana ao anatin'ny herintaona manomboka amin'ny daty nividianana tamin'ny faktiora.
1. Raha misy lesoka hita amin'ny fitaovana sy / na ny asa tanana, izay miteraka tsy fahombiazan'ny kalitao.
2. Raha simba ny peratra slip amin'ny alàlan'ny fonosana na fitaterana tsy mety.
3. Raha ny peratra slip dia tsy afaka miasa ara-dalàna amin'ny fampiasana mahazatra sy mety.
NAOTY: Raha antenaina hampiasaina amin'ny faritra mahatsiravina na manimba ny fivondronan'ny peratra, dia manaova fanambarana mazava aminay, mba hahafahanay manao ireo vokatra voatsabo manokana mifanaraka amin'ny antenainao manokana.